Abiy Ahmed oo Qeylo-dhaan soo saaray "Itoobiyaanka waa inay Hubka qaataan oo ka hortagaan TPLF" - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Abiy Ahmed oo Qeylo-dhaan soo saaray "Itoobiyaanka waa inay Hubka qaataan oo ka hortagaan TPLF" - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dhammaan dagaalladii ay soo qaadeen TPLF ayuu sheegay in lagu jebiyey, lagana hortegay, wuxuuna ku dhaartay inay ka adkaan doonaan argagixisada Tigreega, sida uu yiri.
Gobolka Amxaarada oo xalad aadag wajahaya ayaa soo saaray amar xaalad degdeg ah iyo in la xiro dhammaan xafiisyada dowladda, lana joojiyo shaqooyinka, iyadoo dadka loo diyaarinayo inay dagaalamaan, kana hortagaan Jabhadda Tigray ee soo qabsatay magaalooyinkii Amxaarada.
Previous articleRW Rooble oo Guddi Wasiiro ah u magacaabay fulinta Wareegtadii Dhulka Danta Guud ee Farmaajo
Next articleXildhibaano lasii ogyahay oo maanta lagu furayo Doorashada Golaha Shacabka 2021 (Akhriso)